အမ်​​ကေဒွန်း ၀ – ၂ လီ​ဗာပူး EFL ဖလားပွဲစဉ်​မှာ ဘယ်​သူ​တွေ အ​ကောင်းဆုံး ​ခြေစွမ်းပြ ခဲ့ပြီး ဘယ်​သူ​တွေ လိုအပ်​ချက်​ ရှိခဲ့သလဲ? (Player ratings) - SPORTS MYANMAR
အမ်​​ကေဒွန်း ၀ – ၂ လီ​ဗာပူး EFL ဖလားပွဲစဉ်​မှာ ဘယ်​သူ​တွေ အ​ကောင်းဆုံး ​ခြေစွမ်းပြ ခဲ့ပြီး ဘယ်​သူ​တွေ လိုအပ်​ချက်​ ရှိခဲ့သလဲ? (Player ratings)
လီ​ဗာပူးဟာ ယ​နေ့ မနက်​က ကစားသွားခဲ့တဲ့ EFL ဖလား တတိယအဆင့်​မှာ​တော့ လိဂ်​ဝမ်းကလပ်​ အမ်​​ကေဒွန်း အသင်းကို ၂-၀ နဲ့ နိုင်​ကာ ​နောက်​တဆင့်​ကို တက်​သွား ခဲ့ပါတယ်​။ လီ​​ဗာပူး အတွက်​ ပထမဂိုး​ကို​တော့ ဂျိမ်းမီနာ ပင်​နယ်​တီ ဧရိယာထိပ်​က​နေ ကန်​သွင်းမှု​ကို ပြိုင်​ဘက်​ ဂိုးသမား ပုတ်​ထုတ်​ ရာမှာ မ​သေမသပ်​ ဖြစ်​ကာ ဂိုးထဲ ပြန်​ဝင်​ သွားခဲ့တာ​ကြောင့်​ လီ​ဗာပူး တို့ ဦး​ဆောင်​ဂိုး ရခဲ့ပါတယ်​။ လီ​ဗာပူး အတွက်​ ဒုတိယဂိုး ကို​တော့ မိနစ်​ ၇၀ ​လောက်​မှာ မီနာ ဂိုး​ရှေ့ကို ဖြတ်​တင်​​ပေးလိုက်​တဲ့ ​ဘောလုံးကို ကီဂျမ်​နာ​ဟူ​ဗာက ​ပြေးဝင်​ ​ခေါင်းတိုက်​ သွားခဲ့တာ ဖြစ်​ပါတယ်​။ ဒီပွဲစဉ်​မှာ လီ​ဗာပူး ရဲ့ ဘယ်​ကစားသမား​တွေ ​ခြေစွမ်းပြခဲ့ပြီး ဘယ်​သူ​တွေ ​ခြေစွမ်း မပြနိုင်​သလဲ ဆိုတာကို ယခုလို ​ဖော်​ပြ​ပေးလိုက်​ပါတယ်​။
ကယ်​လီဟာ – ၇
အသင်းရဲ့ build up play မှာ အ​ကောင်းဆုံး ကစား နိုင်​ခဲ့ပြီး လိုအပ်​ရင်​ sweeper keeper အဖြစ်​ပါ ကစား သွားခဲ့ကာ ဒုတိယပိုင်းမှာ ​သေချာ​ပေါက်​ ဂိုး​ပေးရနိုင်​တဲ့ အခွင့်​အ​ရေး ၃ ကြိမ်​​​လောက်​ကို လက်​စွမ်းပြ ကာကွယ်​ ​ပေးသွားပါတယ်​။
​ဟူဗာ – ၆.၅
ပထမပိုင်းမှာ ပြိုင်​ဘက်​ရဲ့ ကြံ့ခိုင်​မှု အပြည့်​နဲ့ ဖိအား​ပေး ကစားပုံ ​အောက်​မှာ ရုန်းကန်​ ခဲ့ရ​ပေမယ့်​ ဒုတိယပိုင်းမှာ ဒါကို ပြင်​ဆင်​ နိုင်​ခဲ့ပြီး သွင်းဂိုးပါ ရခဲ့ပါတယ်​။ ဒါ​ပေမယ့်​ အသင်း​ဖော်​​တွေ အတွက်​ ဖန်​တီး ​ပေးပို့မှု​တွေ​တော့ လိုအပ်​ ​နေပါ​သေးတယ်​။
​လော့​ဗရန်​ – ၆
ပထမပိုင်းမှာ ၎င်းရဲ့ အမှား​ကြောင့်​ ဂိုး​ပေးရမလို ဖြစ်​ခဲ့​ပေမယ့်​လည်း ဒုတိယပိုင်းမှာ​တော့ ဂိုးစည်း​ပေါ်က ရှင်းထုတ်​မှု​ အပါအဝင်​ အခြား ကာကွယ်​မှုေ​တွလည်း လုပ်​​ပေး ခဲ့ပါတယ်​။
ဂိုးမက်​ဇ်​ – ၆
၎င်းရဲ့ လူကျွံ​ဘော ဖမ်းပုံ မ​သေသပ်​တာ​ကြောင့်​ ဂိုး​ပေးရနိုင်​တဲ့ အ​ခြေအ​နေ ဖြစ်​ခဲ့ပြီး ​​လော့​ဗရန်​ နဲ့အတူ ကျစ်​လစ်​တဲ့ ခံစစ်​ ကစားပုံကို မပြနိုင်​ခဲ့ပါဘူး။
မီနာ – ၈
ဘယ်​​နောက်​ခံလူ ​နေရာမှာ ဝင်​ကစား ခဲ့​ပေမယ်​လည်း အသင်း အတွက်​ ဦး​ဆောင်​ဂိုးကို သွင်းယူ ​ပေးခဲ့သလို ဟူ​ဗာအတွက်​လည်း ဂိုးဖန်​တီးမှု လုပ်​​ပေး ခဲ့ပါတယ်​။
လယ်​လာနာ – ၇
နံပါတ်​ ၆ ​နေရာမှာ အားကိုး ရနိုင်​တဲ့ ​ခြေစွမ်းကို ပြသ သွားခဲ့ပြီး ခံစစ်ပိုင်း ကစားပုံ အနည်းငယ်​ အားနည်းမှု ရှိတာက လွဲလို့ ​ဘောလုံး အကွက်​မြင်​မြင်​ ​ပေးပို့မှု​တွေ ၊ build-up play ​တွေမှာ ကစားပုံ ​ကောင်းခဲ့ပါတယ်​။
ကီတာ – ၆
ဒဏ်​ရာ က​နေ ပြန်​လည်​ သက်​သာလာခါစ ဖြစ်​တာ​ကြောင့်​ စွန့်​စားပြီး ကစား သွားခဲ့မှု မရှိ​ပေမယ့်​လည်း ယာဂန်​က​လော့ အ​နေနဲ့ လာမည့်​ ပွဲ​တွေမှာ ကွင်းလယ်​ပိုင်း ​ရွေးချယ်​ စရာ​တွေ များလာတာ က​တော့ အားတက်​စရာ ပါပဲ။
​အောက်​စလိတ်​ချိန်​ဘာလိန်​ – ၆
အသင်း​ဖော်​​တွေနဲ့ ချိတ်​ဆက်​ ကစားပုံ ​ကောင်းမွန်​ခဲ့ပြီး ဒုတိယပိုင်းမှာ ၎င်းရဲ့ ကန်​ချက်​ တိုင်​ထိထွက်​ ခဲ့ပါတယ်​။ ဒါ​ပေမယ့်​ တိုက်​စစ်​ကို ပံ့ပိုး ကစားမှုက​တော့ အရင်​ ပုံစံကို မမှီ​သေးပါဘူး။
ကာတစ်​ဂျုံး – ၇
ဘယ်​​တောင်​ပံ တိုက်​စစ်​မှာ မီနာနဲ့ တွဲဖက်​ ညီညီ လှုပ်​ကစား သွားခဲ့ပြီး ပြိုင်​ဘက်​ ခံစစ်​ကို ဖိအားများ ​စေခဲ့​ပေမယ့်​လည်း ပြိုင်​ဘက်​ ဂိုး​ပေါက်​ကို​တော့ သိပ်​ပြီး မခြိမ်း​ခြောက်​ နိုင်​ခဲ့ပါဘူး။
အယ်​လီ​ယော့ – ၇
အသက်​၁၆ နှစ်​သာ ရှိ​သေး​ပေမယ့်​ ၎င်းရဲ့ ကြီးမားတဲ့ အလားအလာ ရှိတဲ့ အရည်​အ​သွေး ​တွေကို ပြသသွား ခဲ့ပြီး ဒီပွဲမှာ ကံမ​ကောင်းစွာနဲ့ တိုင်​၂ကြိမ်​ ထိခဲ့သလို ပထမပိုင်းမှာလည်း မီနာအတွက်​ အ​ကောင်းဆုံး ဂိုးဖန်​တီးမှုလည်း လုပ်​​ပေး ခဲ့ပါတယ်​။
ဘရူစတား – ၆
ပြိုင်​ဘက်​ ဂိုး​ပေါက်​ကို ထိ​ရောက်​တဲ့ ကန်​သွင်းမှု​ မလုပ်​ နိုင်ခဲ့​​ပေမယ့်​ တိုက်​စစ်​မှာ ​နေရာစုံ ​ရွေ့လျားကာ အားထုတ်​မှု အပြည့်​နဲ့ ကစား သွားခဲ့ပါတယ်​။
လူစားဝင် – ချယ်​ရီ​ဗယ်​လာ ၆
အမျ​​ကဒှေနျး ၀ – ၂ လီ​ဗာပူး EFL ဖလားပှဲစဉျ​မှာ ဘယျ​သူ​တှေ အ​ကောငျးဆုံး ​ခွစှေမျးပွ ခဲ့ပွီး ဘယျ​သူ​တှေ လိုအပျ​ခကျြ​ ရှိခဲ့သလဲ? (Player ratings)
လီ​ဗာပူးဟာ ယ​နေ့ မနကျ​က ကစားသှားခဲ့တဲ့ EFL ဖလား တတိယအဆငျ့​မှာ​တော့ လိဂျ​ဝမျးကလပျ​ အမျ​​ကဒှေနျး အသငျးကို ၂-၀ နဲ့ နိုငျ​ကာ ​နောကျ​တဆငျ့​ကို တကျ​သှား ခဲ့ပါတယျ​။ လီ​​ဗာပူး အတှကျ​ ပထမဂိုး​ကို​တော့ ဂြိမျးမီနာ ပငျ​နယျ​တီ ဧရိယာထိပျ​က​နေ ကနျ​သှငျးမှု​ကို ပွိုငျ​ဘကျ​ ဂိုးသမား ပုတျ​ထုတျ​ ရာမှာ မ​သမေသပျ​ ဖွဈ​ကာ ဂိုးထဲ ပွနျ​ဝငျ​ သှားခဲ့တာ​ကွောငျ့​ လီ​ဗာပူး တို့ ဦး​ဆောငျ​ဂိုး ရခဲ့ပါတယျ​။ လီ​ဗာပူး အတှကျ​ ဒုတိယဂိုး ကို​တော့ မိနဈ​ ရ၀ ​လောကျ​မှာ မီနာ ဂိုး​ရှကေို့ ဖွတျ​တငျ​​ပေးလိုကျ​တဲ့ ​ဘောလုံးကို ကီဂမျြ​နာ​ဟူ​ဗာက ​ပွေးဝငျ​ ​ခေါငျးတိုကျ​ သှားခဲ့တာ ဖွဈ​ပါတယျ​။ ဒီပှဲစဉျ​မှာ လီ​ဗာပူး ရဲ့ ဘယျ​ကစားသမား​တှေ ​ခွစှေမျးပွခဲ့ပွီး ဘယျ​သူ​တှေ ​ခွစှေမျး မပွနိုငျ​သလဲ ဆိုတာကို ယခုလို ​ဖျော​ပွ​ပေးလိုကျ​ပါတယျ​။
ကယျ​လီဟာ – ရ
အသငျးရဲ့ build up play မှာ အ​ကောငျးဆုံး ကစား နိုငျ​ခဲ့ပွီး လိုအပျ​ရငျ​ sweeper keeper အဖွဈ​ပါ ကစား သှားခဲ့ကာ ဒုတိယပိုငျးမှာ ​သခြော​ပေါကျ​ ဂိုး​ပေးရနိုငျ​တဲ့ အခှငျ့​အ​ရေး ၃ ကွိမျ​​​လောကျ​ကို လကျ​စှမျးပွ ကာကှယျ​ ​ပေးသှားပါတယျ​။
ပထမပိုငျးမှာ ပွိုငျ​ဘကျ​ရဲ့ ကွံ့ခိုငျ​မှု အပွညျ့​နဲ့ ဖိအား​ပေး ကစားပုံ ​အောကျ​မှာ ရုနျးကနျ​ ခဲ့ရ​ပမေယျ့​ ဒုတိယပိုငျးမှာ ဒါကို ပွငျ​ဆငျ​ နိုငျ​ခဲ့ပွီး သှငျးဂိုးပါ ရခဲ့ပါတယျ​။ ဒါ​ပမေယျ့​ အသငျး​ဖျော​​တှေ အတှကျ​ ဖနျ​တီး ​ပေးပို့မှု​တှေ​တော့ လိုအပျ​ ​နပေါ​သေးတယျ​။
​လော့​ဗရနျ​ – ၆
ပထမပိုငျးမှာ ၎င်းငျးရဲ့ အမှား​ကွောငျ့​ ဂိုး​ပေးရမလို ဖွဈ​ခဲ့​ပမေယျ့​လညျး ဒုတိယပိုငျးမှာ​တော့ ဂိုးစညျး​ပျေါက ရှငျးထုတျ​မှု​ အပါအဝငျ​ အခွား ကာကှယျ​မှုေ​တှလညျး လုပျ​​ပေး ခဲ့ပါတယျ​။
ဂိုးမကျ​ဇျ​ – ၆
၎င်းငျးရဲ့ လူကြှံ​ဘော ဖမျးပုံ မ​သသေပျ​တာ​ကွောငျ့​ ဂိုး​ပေးရနိုငျ​တဲ့ အ​ခွအေ​နေ ဖွဈ​ခဲ့ပွီး ​​လော့​ဗရနျ​ နဲ့အတူ ကဈြ​လဈ​တဲ့ ခံစဈ​ ကစားပုံကို မပွနိုငျ​ခဲ့ပါဘူး။
ဘယျ​​နောကျ​ခံလူ ​နရောမှာ ဝငျ​ကစား ခဲ့​ပမေယျ​လညျး အသငျး အတှကျ​ ဦး​ဆောငျ​ဂိုးကို သှငျးယူ ​ပေးခဲ့သလို ဟူ​ဗာအတှကျ​လညျး ဂိုးဖနျ​တီးမှု လုပျ​​ပေး ခဲ့ပါတယျ​။
လယျ​လာနာ – ရ
နံပါတျ​ ၆ ​နရောမှာ အားကိုး ရနိုငျ​တဲ့ ​ခွစှေမျးကို ပွသ သှားခဲ့ပွီး ခံစဈပိုငျး ကစားပုံ အနညျးငယျ​ အားနညျးမှု ရှိတာက လှဲလို့ ​ဘောလုံး အကှကျ​မွငျ​မွငျ​ ​ပေးပို့မှု​တှေ ၊ build-up play ​တှမှော ကစားပုံ ​ကောငျးခဲ့ပါတယျ​။
ဒဏျ​ရာ က​နေ ပွနျ​လညျ​ သကျ​သာလာခါစ ဖွဈ​တာ​ကွောငျ့​ စှနျ့​စားပွီး ကစား သှားခဲ့မှု မရှိ​ပမေယျ့​လညျး ယာဂနျ​က​လော့ အ​နနေဲ့ လာမညျ့​ ပှဲ​တှမှော ကှငျးလယျ​ပိုငျး ​ရှေးခယျြ​ စရာ​တှေ မြားလာတာ က​တော့ အားတကျ​စရာ ပါပဲ။
​အောကျ​စလိတျ​ခြိနျ​ဘာလိနျ​ – ၆
အသငျး​ဖျော​​တှနေဲ့ ခြိတျ​ဆကျ​ ကစားပုံ ​ကောငျးမှနျ​ခဲ့ပွီး ဒုတိယပိုငျးမှာ ၎င်းငျးရဲ့ ကနျ​ခကျြ​ တိုငျ​ထိထှကျ​ ခဲ့ပါတယျ​။ ဒါ​ပမေယျ့​ တိုကျ​စဈ​ကို ပံ့ပိုး ကစားမှုက​တော့ အရငျ​ ပုံစံကို မမှီ​သေးပါဘူး။
ကာတဈ​ဂြုံး – ရ
ဘယျ​​တောငျ​ပံ တိုကျ​စဈ​မှာ မီနာနဲ့ တှဲဖကျ​ ညီညီ လှုပျ​ကစား သှားခဲ့ပွီး ပွိုငျ​ဘကျ​ ခံစဈ​ကို ဖိအားမြား ​စခေဲ့​ပမေယျ့​လညျး ပွိုငျ​ဘကျ​ ဂိုး​ပေါကျ​ကို​တော့ သိပျ​ပွီး မခွိမျး​ခွောကျ​ နိုငျ​ခဲ့ပါဘူး။
အယျ​လီ​ယော့ – ရ
အသကျ​၁၆ နှဈ​သာ ရှိ​သေး​ပမေယျ့​ ၎င်းငျးရဲ့ ကွီးမားတဲ့ အလားအလာ ရှိတဲ့ အရညျ​အ​သှေး ​တှကေို ပွသသှား ခဲ့ပွီး ဒီပှဲမှာ ကံမ​ကောငျးစှာနဲ့ တိုငျ​၂ကွိမျ​ ထိခဲ့သလို ပထမပိုငျးမှာလညျး မီနာအတှကျ​ အ​ကောငျးဆုံး ဂိုးဖနျ​တီးမှုလညျး လုပျ​​ပေး ခဲ့ပါတယျ​။
ဘရူစတား – ၆
ပွိုငျ​ဘကျ​ ဂိုး​ပေါကျ​ကို ထိ​ရောကျ​တဲ့ ကနျ​သှငျးမှု​ မလုပျ​ နိုငျခဲ့​​ပမေယျ့​ တိုကျ​စဈ​မှာ ​နရောစုံ ​ရှလြေ့ားကာ အားထုတျ​မှု အပွညျ့​နဲ့ ကစား သှားခဲ့ပါတယျ​။
လူစားဝငျ – ခယျြ​ရီ​ဗယျ​လာ ၆